Nepal - [झटारो] म प्रधानमन्त्री भएको भए
ओलीले मोदीलाई नमस्कार गर्दा झुकेर गरेनन् भन्ने भनाइ उनका समर्थकहरूको छ । तर, वास्तवमा उनको मन पूरै लम्पसार परेको थियो, उनी निहुरिन पनि खोज्दै थिए । ढाडको समस्याले गर्दा मात्रै शरीर नै झुकेन । म प्रधानमन्त्री भएको भए त्यसरी मनमनमा पनि झुक्ने थिइनँ । ओलीका समर्थकहरूले प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मोदीलाई उपहार दिँदा मोदीले निकै झुकेर उपहार लिँदै गरेको तस्बिरलाई खुब प्रचार गरे । म भएको भए त्यो उपहार दिँदा भुइँमा टुक्रुक्क बसेर दिन्थेँ र मोदीलाई भुइँसम्मै झुकाइदिन्थेँ । राष्ट्रको शिर ठड्याउन जान्नुपर्‍यो नि !
म प्रधानमन्त्री भएको भए मोदीसँग आउन लागेका सुरक्षाकर्मीको संख्या पहिले नै सोध्थेँ र उनले ल्याउन लागेको संख्यामा २/३ जना घटाउन लाउँथेँ । यसरी म प्रधानमन्त्री भएको भए देशको शिर पूरै ठाडो पार्ने थिएँ । नेपाली जनताको दुर्भाग्य ! म प्रधानमन्त्री छैन र मजत्तिको राष्ट्रवादी व्यक्ति कहिल्यै यो देशको प्रधानमन्त्री हुने छाँट पनि छैन ।